Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. आज मंगलबार, विशेष गरी श्री गणेश भगवानलाई पूजा गर्ने दिन! गणेश भगवानको फोटोलाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। – Janata Live
आज मंगलबार, विशेष गरी श्री गणेश भगवानलाई पूजा गर्ने दिन! गणेश भगवानको फोटोलाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
मेष – दिन शुभ र भाग्योदयकारी सिद्ध होला । आरोग्यता र प्रशन्नता बढ्नेछ । सुखशान्तिमा वृद्धि हुनेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । विलासमा पनि आकर्षण बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । विजयश्री प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । प्रेममा रूचि बढ्ला । भ्रमण पनि गर्नु हुने सम्भावना रहनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । सुख सन्तति धन यश इष्टमित्र बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ ।
बृष – भागदौडमा वृद्धि हुनेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । विवाद आदिदेखि सचेत भइ अरुको भर नपरेर आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु हितकर रहला । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । सुख र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साह बढ्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ ।
कर्कट – मान पुरस्कार मिल्नेछ । आय वृद्धि होला । कर्मयोगी रहनुहुनेछ । यश वर्चश्वमा वृद्धि हुनेछ । व्यवसायिक पक्षसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । आंँट उत्साह बढ्ला । प्रयासरत काम बन्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । उच्चाधिकारीको सहयोग समर्थन मिल्नेछ ।
तुला – धन आउने–जाने भइरहने छ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । समस्याको समाधान मिल्नेछ । सुख समृद्धि मान पुरस्कार आदिमा विघ्नबाधाको डर रहला । मिठो भोजन प्राप्ति हुनेछ । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर विवादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
वृश्चिक – आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्ला । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ ।
धनु – धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीत–संगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । सन्ततिसुख बढ्नेछ ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नुहोला । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
मीन – आय वृद्धि होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । गौरवमा बढोत्तरी हुनेछ । लगानी उठ्नेछ । अन्नधन बढ्ला । सुख शान्ति मान महत्व बढ्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्ला । आरोग्यता बढ्नेछ ।